FAQ – Flexible Pass
Flexible Pass ဆိုတာဘာလဲ?
(2)	Flexible Pass ကို ဘာကြောင့် သုံးသင့်တာလဲ?
ကိုယ်နဲ့အနီးဆုံးမှာရှိတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေ (သို့) တခြား အသုံးပြုသူတွေက ထောက်ခံချက်ပေးထားတဲ့ အကောင်းဆုံးသော ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကို လွယ်လွယ်ကူကူ ရှာဖွေလို့ရတယ်
ဝယ်ယူထားတဲ့ Membership Plan နဲ့ Booking အလွယ်တကူ တင်လို့ရတယ်
ဝယ်ယူထားတဲ့ Membership Plan ပေါ် မူတည်ပြီး အထူးအခွင့်အရေးတွေ ရနိုင်တယ်
Membership တစ်ခုတည်းနဲ့ Fitness၊ wellness လိုအပ်ချက်အားလုံးအတွက် သုံးလို့ရတယ်
(3)	Flexible Pass ကို ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲ?
Flexible Pass app ကို Google Playstore မှတဆင့်သော်လည်းကောင်း၊ App store မှတဆင့်သော်လည်းကောင်း ဒေါင်းလုတ်ရယူပြီး သင့်၏ အီးမေးလိပ်စာဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ဖေ့ဘွတ်ခ်အကောင့်ဖြစ်သော်လည်းကောင်း၊ Apple ID ဖြင့်သော်လည်းကောင်း အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးပါ
သင်နဲ့အဆင်ပြေမယ့် “Membership Plan” တစ်ခုကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူပါ။
ကျန်းမာရေးနဲ့ အလှအပဆိုင်ရာ ပင်မ Category (၈)ခုမှ ဝန်ဆောင်မှုများကို ရှာဖွေပါ။
ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ကျန်းမာရေးနဲ့ အလှအပဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများကို ရှာပါ။
သွားချင်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကို ရွေးချယ်ပြီး Membership နဲ့ ဘိုကင်တင်ပါ။
Booking တင်ထားတဲ့ရက်မှာ ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူနိုင်ပါပြီ။
(4)	Flexible Pass Membership Plan ဆိုတာက ဘာလဲ?
Flexible Pass Membership Plan ကို Bronze, Silver, Gold နဲ့ Diamond ဆိုပြီး (၄)မျိုးခွဲထားပါတယ်။ Membership Plan တွေမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ Points အသီးသီး ထည့်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Membership Plan အလိုက် တစ်ခုနဲ့တစ်ခု အကျိုးခံစားခွင့်တွေလည်း တူမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ (အကျိုးခံစားခွင့်တွေကတော့ အခမဲ့ Booking တင်ခွင့်တွေ၊ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ပါတနာတွေကနေရမယ့် discount တွေ အစရှိတာတွေဖြစ်ပါတယ်) အသေးစိတ်ကိုတော့ official Facebook Page နှင့် website တွင် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ကြေငြာပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
(5)	“Points” ဆိုတာ ဘာလဲ?
Flexible Pass Membership Plan ဝယ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ “Points” တွေကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထို “Points” တွေကို ဝန်ဆောင်မှုတွေကို ဘိုကင်တင်တဲ့နေရာမှာ အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ Membership မှာ “Points” အလုံအလောက်ရှိနေသရွေ့ ဘိုကင်တွေ တင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ “Points” တွေရဲ့သက်တမ်းဟာလည်း Membership အလိုက် မတူပါဘူး။ Membership Plan အလိုက် Points သက်တမ်းတွေကို အောက်ပါအတိုင်း ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Bronze Membership Plan - 25,000 Points (၁လ သက်တမ်း)
Silver Membership Plan - 50,000 Points (၃လ သက်တမ်း)
Gold Membership Plan - 150,000 Points (၆လ သက်တမ်း)
Diamond Membership Plan - 300,000 Points (၁နှစ် သက်တမ်း)
(6)	“Points” ရဲ့တန်ဖိုးက ဘယ်လောက်လဲ?
1 Point ရဲ့ တန်ဖိုးက မြန်မာငွေ “တစ်ကျပ်” နဲ့ ညီမျှပါတယ်။
(7)	သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်မတိုင်ခင် “Points” များကို ကုန်အောင်မသုံးရင် သက်တမ်းကုန်မှာလား?
သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်မတိုင်ခင် “Points” များကို ကုန်အောင်မသုံးပါက Points များ သက်တမ်းကုန်သွားမှာဖြစ်ပါသည်။
(8)	“Points” သက်တမ်းကို တိုးလို့ရနိုင်ပါသလား?
သက်တမ်းမကုန်မီ membership plan ထပ်မံဝယ်ယူလိုက်ပါက အောက်ပါအတိုင်း Points သက်တမ်း တိုးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ Membership plan ကို upgrade လုပ်လိုက်ပါက “Points” များရဲ့ သက်တမ်းသည်လည်းတိုးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ - သင်ဟာ Bronze Member ဝင်ဖြစ်ပြီး Points 10,000 ကျန်ရှိသူ၊ ထို Points သက်တမ်း ၇ရက် ကျန်သူက “Silver Membership”ကို တိုးမြှင့်ဝယ်လိုက်မည်ဆိုပါက သင့်ဆီတွင် စုစုပေါင်း Points 60,000 ရှိလာမည်ဖြစ်ပြီး Points သက်တမ်းသည် (၃) လ ခံမည်ဖြစ်ပါသည်။ Membership plan ကို downgrade လုပ်လိုက်ပါက “Points” များရဲ့ သက်တမ်း လျော့သွားမည် မဟုတ်ပါ။ နဂိုသက်တမ်းအတိုင်း ကျန်နေဦးမှာဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ - Gold Member ဖြစ်ပြီး လက်ကျန် Points 20,000 ကျန်ရှိသူ ၊ ထို Points သက်တမ်း ၅ လ ကျန်သူက Bronze Membership ကို ပြောင်းလဲဝယ်လိုက်မည်ဆိုပါက သင့်ဆီတွင် စုစုပေါင်း Points 45,000 ရှိလာမှာဖြစ်ပြီး Points သက်တမ်းကတော့ ၅လ ကျန်နေမည်ဖြစ်ပါသည်။
(9)	Booking တစ်ခုအတွက် Points ဘယ်လောက်သုံးရမလဲ?
Booking တစ်ခုအတွက် ကျသင့်ငွေသည် လူကြီးမင်းတို့သွားလိုသော နေရာ၊ အချိန်နှင့် အားကစားနည်းအမျိုးအစားပေါ် မူတည်ပါသည်။ သွားလိုသောနေရာနှင့် အားကစားနည်းအမျိုးအစားအပေါ် မူတည်ပြီး booking ပြုလုပ်ရန် ကျသင့်မည့် points ကို application တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
(10)	သက်တမ်းကုန်သွားတဲ့ Points တွေအတွက် ငွေပြန်အမ်းပေးပါသလား?
သက်တမ်းကုန်သွားတဲ့ Points တွေအတွက် ငွေမပြန်အမ်းပေးပါ။ သို့သော်ငြား သက်တမ်းမကုန်ခင်မှာ Membership Plan ထပ်မံဝယ်ယူလိုက်ပါက သင်၏ လက်ရှိရှိနေသော points များကို ထပ်မံဆင့်ပေါင်းသွားမှာဖြစ်ပြီး သက်တမ်းတိုးသွားမှာဖြစ်ပါသည်။
(11)	Membership Plan ပြောင်းလိုက်မည်ဆိုပါက မည်သို့ပြောင်းလဲလာမည်လဲ?
Higher Membership Plan မှ Lower Membership Plan ကို ပြောင်းလဲလိုက်မည်ဆိုပါက Lower Membership ၏ အကျိုးခံစားခွင့်များကိုသာ ခံစားရမည်ဖြစ်ပြီး၊ Lower Membership Plan မှ Higher Membership Plan ကို မြှင့်လိုက်ပါက Higher Membership ၏ အကျိုးခံစားခွင့်များ ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ - Diamond Member သည် Bronze Member ဖြစ်သွားပါက Bronze Member ၏ အကျိုးခံစားခွင့်များကိုသာ ရှရိတော့မည်ဖြစ်ပြီး Bronze Member သည် Silver Member ဖြစ်သွားပါက Silver Member အကျိုးခံစားခွင့်များ ရရှိမည်ဖြစ်သည်
(12)	Membership level နဲ့ သုံးနိုင်သည့် Points အရေအတွက်နဲ့ သက်တမ်း ဘယ်မှာ ကြည့်လို့ရနိုင်မလဲ?
သင့်ရဲ့ Membership level၊ သုံးနိုင်သည့် Points အရေအတွက်နှင့် သက်တမ်းကို “HomeTab” တွင် ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ Membership အလိုက် သက်ဆိုင်ရာအရောင်၊ icon တို့နဲ့ ခွဲခြားပေးထားမည်ဖြစ်ပါသည်။
(13)	Flexible Pass Membership စျေးနှုန်းက ဘယ်လောက်လဲ?
Bronze Membership Plan - ၂၅,၀၀၀ ကျပ်
Silver Membership Plan - ၅၀,၀၀၀ ကျပ်
Gold Membership Plan - ၁၅၀,၀၀၀ ကျပ်
Diamond Membership Plan - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ်
(14)	Flexible Pass Membership ကို ဘယ်လိုဝယ်ရမလဲ?
Flexible Pass Membership ကို အောက်ပါနည်းလမ်းများဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
ဘဏ်မှတစ်ဆင့် ငွေလွှဲခြင်း ( KBZ, AYA, CB)
Online debit card နဲ့ Credit Card များ
Convenience စတိုးများ (ဥပမာ g&g နှင့် abc)
(15)	ဝယ်ယူထားသော membership plan ကို ငွေသားပြန် လဲယူလို့ရနိုင်မလား?
ဝယ်ယူထားသော membership plan ကို ငွေသားဖြင့် ပြန်လည်လဲပြီး ထုတ်လို့မရနိုင်ပါ။
(16)	Membership Plan ကို သက်တမ်းလို့ရနိုင်သလား သို့ ဖျက်သိမ်းလို့ရနိုင်လား?
သက်တမ်းမကုန်ခင်မှာ Membership Plan ကို သက်တမ်းတိုးလို့ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဝယ်ယူပြီးသား Membership plan ကို ဖျက်သိမ်းလို့ မရနိင်ပါ။
(17)	Flexible Pass ကို ဘယ်မြို့ နယ်တွေမှာ အသုံးပြုလို့ ရနိုင်မလဲ?
Flexible Pass ကို မြို့ကြီး (၁၀)မြို့ မှာ အသုံးပြုလို့ ရနိုင်ပေမယ့် ကိုဗစ်ကာလ လတ်တလောတွင်တော့ မန္တလးအပါအဝင်တခြား မြို့ကြီး (၈)မြို့မှာ သုံးလို့ မရနိုင်သေးပါဘူး။ ရန်ကုန်မှာပဲ အသုံးပြုနိုင်ဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ စပြီး အသုံးပြုနိုင်သည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် official Facebook Page နှင့် website တွင် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ကြေငြာပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
(18)	Flexible Pass ကို Fitness အတွက်ပဲ သုံးလို့ရတာလား?
Not only for fitness but also for other services like sports activities, fun activities, wellness, healthy food, supplements, exercise equipment and apparel.
(19)	Flexible Pass ကို အသုံးပြုပြီး Booking ဘယ်လိုတင်မလဲ?
ကြိုက်နှစ်သက်ရာ Membership plan ဝယ်ယူပြီးပါက application ကိုအသုံးပြုပြီး ဝန်ဆောင်မှုများကို booking တင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်နှင့်အနီးဆုံးနေရာတွင်ရှိသော ဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် သွားလိုသောနေရာကို တိုက်ရိုက်ရှာနိုင်ပါသည်။ သွားလိုသောနေရာကို ရှာပြီးပါက booking တင်လိုသော နေ့နှင့်အချိန်ကို ရွေးချယ်ပြီး “Book” ခလုတ်ကို နှိပ်ကာ booking တင်နိုင်ပါသည်။
(20)	Booking ကို ကြိုတင်ထားလို့ရနိုင်မလား?
အားကစားနည်းအများစုကိုတော့ ကြိုတင် booking ပြုလုပ်ထားဖို့မလိုပါ။ ဒါပေမယ့် တချို့အားကစားနည်းဖြစ်တဲ့ မြင်းစီးအားကစားနည်းမျိုးအတွက်တော့ booking ကြိုတင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါသည်။ ကြိုတင် booking ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ အချိန်နှင့်နေ့ရက်ကိုလည်း application ထဲမှာ ပြထားပေးထားပါသည်။
(21)	Booking တင်ပြီးပါက Cancel လို့ရနိုင်လား?
Booking ပြုလုပ်ပြီးပါက Cancel လို့ မရနိုင်ပါ။
(22)	Booking တင်ထားတဲ့နေရာရောက်ရင် ဘာလုပ်ရမလဲ?
Booking တင်တုန်းကရတဲ့ QR Code လေးကို ပြလိုက်ရုံပါပဲ။ ဒါဆိုရင် service provider တွေက record လုပ်ပြီးဖြစ်ဖြစ် scan ဖတ်ပြီးဖြစ်ဖြစ် အတည်ပြုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
(23)	အသုံးပြုထားသော Points များနှင့် Booking များကို ဘယ်မှာကြည့်လို့ရနိုင်မလဲ?
App ၏ “Booking History” မှာ အသေးစိတ်ကို ကြည့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
(24)	Points များကို တခြားသူများထံ လွှဲပေးလို့ ရနိုင်မလား?
Flexible Pass App မှ Menu Tab သို့သွားပြီး “Redeem Promo Code”ကို နှိပ်ပါ။ ထို့နောက် လူကြီးမင်းတို့လက်ခံရရှိထားသော promo codes ကိုရိုက်ထည့် ပြီး “Redeem” ခလုပ်ကို နှိပ်ပြီး ရယူနိုင်ပါသည်။
(25)	Points များကို တခြားသူများထံ လွှဲပေးလို့ ရနိုင်မလား?
Points များကို တခြားသူများထံ လွှဲပေးလို့ မရနိုင်ပါ။
(26)	Flexible Pass Account ကို မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများအား ပေးသုံးနိုင်မလား?
Flexible Pass Account သည် တစ်ကိုယ်ရည်သုံးအတွက်သာ ရည်ရွယ်ပြီး တခြားသူများနဲ့ မျှသုံး၍မရနိုင်ပါ။
(27)	မိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်းအတွက် Membership Plan ဝယ်ပေးလို့ရလား?
Customer Service Team ကို အောက်ပါ နည်းလမ်းများဖြင့် ဆက်သွယ်ပြီး ဝယ်ယူပေးနိုင်ပါသည်။
Facebook Page Message Box: www.facebook.com/flexiblepass)
Email : info@flexiblepass.com
Customer Service Hotline: +959966854000
Viber : +959966854000
(28)	Flexible Pass အသုံးပြုနည်းလမ်းညွှန်ကို ဘယ်မှာကြည့်ရမလဲ?
“Menu Tab” ကိုဝင်ပြီး “Tutorial Guide”ကို ဝင်ကြည့်နိုင်ပါသည်။
(29)	အကြံပေးမှုများ၊ စုံစမ်းချက်များ၊ အခက်အခဲများ၊ Flexible Pass အကောင့်နှင့်ပက်သက်၍သော်လည်းကောင်း အကူအညီရယူလိုပါက တစ်စုံတစ်ရာအတွက် Flexible Pass ကို ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲ?
Flexible Pass ကို အောက်ပါ နည်းလမ်းများဖြင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
Facebook Page Message Box: www.facebook.com/flexiblepass) Email : info@flexiblepass.com Customer Service Hotline: +959966854000 Viber : +959966854000
(30)	Flexible Pass နှင့် ပါတနာအဖြစ် လက်တွဲချင်ပါက ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲ?
Flexible Pass ကို အောက်ပါ နည်းလမ်းများဖြင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ info@flexiblepass.com Customer Service Hotline: +959966854000 Viber : +959966854000